Cleaner | Thiri Cosmetic Co., Ltd. ﻿
14.6.2018, Full time , Service
•	လသာမြို့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်။
•	အသက်(25 မှ 28) နှစ်အတွင်း ဖြစ်ရမည်။
Work location လသာလမ်း, လသာမြို့နယ်, ရန်ကုန်
Job Function: Cleaner
Job posted: 14/6/2018
•	Must have negotiation skill in procurement. •	Able to work under pressure.
8 Days, Full time , Service
•	To handle customer complain,building relationship. •	Able to travel and work under pressure.
•	အရောင်းနှင့်ပက်သက်သော လမ်းကြောင်းများ ၊ Plan များရေးဆွဲနိုင်ရမည်။ •	ကားမောင်းခြင်းဆိုင်ရာ Traffic နှင့် ဆိုင်ရာများကျွမ်းကျင်မှုရှိရမည်။
•	To handle customer complain,building relationship. •	Able to travel and work under pressure. •	Good Communication skills
37 Days, Full time , Service
•	လူအများနှင့်ပြောဆိုဆက်ဆံရာတွင် ပြေပြစ်တိကျစွာပြောဆိုနိုင်ရမည်။ •	Labour Law နှင့်ပက်သတ်၍ နားလည်တတ်ကျွမ်းပြီး ကျွမ်းကျင်စွာဖြေရှင်းနိုင်ရမည်။ HR Staff/Executive
•	ပြောဆိုဆက်ဆံမှု ပြေပြစ်ပြီး ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကောင်းမွန်ရမည်။ •	ကုမ္ပဏီနှင့် ရည်ရှည်လက်တွဲကာ အလုပ်ကြိုးစားသူဖြစ်ရမည်။ •	အရောင်းအတွေ့အကြုံရှိသူများ ဦးစားပေးမည်။ •	အတွေ့အကြုံမရှိသူများလည်း လျှေ ...
76 Days, Full time , Service
104 Days, Full time , Service
128 Days, Full time , Service
269 Days, Full time , Service
270 Days, Full time , Service
291 Days, Full time , Service
339 Days, Full time , Service
345 Days, Full time , Service
Cleaner Driver, Security & Cleaning Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon Thiri Cosmetic Co.,Ltd (Mistine) Driver, Security & Cleaning jobs Driver, Security & Cleaning jobs Cleaner Jobs in Myanmar, jobs in Yangon